ရထားဖြင့် Tomorrowland ရန် Get လုပ်နည်း | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား > ရထားဖြင့် Tomorrowland ရန် Get လုပ်နည်း
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 14/08/2020)
သငျသညျရထား Tomorrowland ရရန်မည်သို့အံ့သြနေပါလျှင်, ထို့နောက်အဘယ်သူမျှမနောက်ထပ်မကွညျ့. ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူကြိုတင် Tomorrowland ရန်သင့်မီးရထားလက်မှတ်ဘွတ်ကင်လုပ်ရန်! သင်တို့အပေါ်မှာဆိုရင်ဒီနှစ် Tomorrowland ဖို့လက်မှတ်တွေရှိသည်ဖို့အတွက်ကံကောင်းလူများက e, သငျသညျနောက်ဆုံးမိနစ်သို့ခရီးသွားအသေးစိတ်ကိုမချန်မထားသေချာပါစေ!
ဒါဟာသည်အထိရှည်လျားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ ပွဲတော် ချွတ်စတင်ကျင်းပ, ဒါကြောင့်သေချာသင်ရထားလက်မှတ်တွေအားဖြင့် Tomorrowland နှင့်အတူကိုပြင်ဆင်နေစေ. Tomorrowland နှစ်ခုနင်္ဂနွေအရပ်ဌာနတာဖြစ်ပါတယ် 2018. ဒါဟာနောက်ဆုံးနှစ်ခုရဲ့ တနင်္ဂနွေ ဇူလိုင်လမှာ: 20-22ကြိမ်မြောက်နှင့် 27- 29ကြိမ်မြောက်. အဆိုပါစုရုံးခြင်း, Dreamville အတွက် campers များအတွက် Pre-ပွဲတော်အဖြစ်အပျက်ရာဖြစ်ပါသည်, တနင်္ဂနွေအဘို့အဇူလိုင်လ 19, ပြီးတော့ဇူလိုင်လ 26 ရက်နေ့ရာအရပ်ကိုကြာ 2.
ရထားဖွငျ့ Tomorrowland ရန် Access ကို:
သင်တစ်ဦးခိုင်လုံသော Tomorrowland လက်ကောက်သင်၏နာမကိုအပေါ်မှတ်ပုံတင်ရှိပါကပွဲတော်မှ access ကိုသာဖြစ်နိုင်.
သောကြာနေ့မှာ & စနေနေ့, စစ်ဆေး-in ကို 22h00 သည်အထိဖွင့်. Access ကိုဤအချိန်ပြီးနောက်ငြင်းဆိုလိမ့်မည်.
တနင်္ဂနွေတွင် check-in 21h00 မှာပိတ်. Access ကိုဤအချိန်ပြီးနောက်ငြင်းဆိုလိမ့်မည်.
Tomorrowland ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမပါဘဲကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဂီတပွဲတော်ဖြစ်ပါသည်. ပိုများသောနိုင်ငံများအိုလံပစ်မှာထက် Tomorrowland မှာ. ဒါဟာအမှန်တကယ်ဖွင့် ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံကို ချိတ်ဆက်ခံစားရရန်နှင့်ပြီးပြည့်စုံသောလမ်း. နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပင်ပိုမိုကြီးမားကြီးထွားလာ, ဒါကြောင့်ပြေးလမ်းဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်လူအစုအဝေးနှင့်အတူလွှမ်းမိုးမရကြဘူး, ရထားဖွငျ့ Tomorrowland ရ.
ရထားဖြင့် Tomorrowland ရန် Get လုပ်နည်း:
Tomorrowland အဆိုပါအပန်းဖြေဧရိယာမှာရာအရပ်ကိုကြာ, de Schorre, Boom အတွက်. Boom မြို့တည်ရှိသည် ဘယ်လ်ဂျီယံ, Antwerp အကြား & ဘရပ်ဆဲလ်. ဒီအသေးငယ်တဲ့မြို့တစ်ပါတီမြင်ကွင်းတစ်ခုအသွင်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်. သူတို့ကပွဲတော်ကာလအတွင်း၎င်းတို့၏ပြတင်းပေါက်ပေါ်မှ Tomorrowland အလံဖော်ပြရန်များသောအားဖြင့်တိတ်ဆိတ်တဲ့မြို့.
အကောင်းဆုံးအဓိက ဘူတာရုံ ရထားဖွငျ့ Tomorrowland ရရရန်ဖြစ်ပါသည် Antwerp ဗဟို. သင်ဒီမှာနေပြီးတာနဲ့သင်က Boom ရန်နောက်ထပ်ရထား get ချင်တာပေါ့.
Boom ဘူတာရုံမှာချွတ် Get နှင့် Tomorrowland ဖို့အခမဲ့ဘတ်စ်ကားလွန်းယူ / DreamVille. တစ်ခုချင်းစီကိုပွဲတော်နေ့ကပြီးနောက်, သုံးအပို ညဥ့်ရထား Antwerp ဗဟိုဘူတာမှ run ပါလိမ့်မယ်.
သစ်: ရက်တွင်, ယခုရှိပါတယ်2တစ်နာရီရထားများအကြား Antwerp-ဗဟိုနှင့် Boom. စနေနေ့နှင့်တနင်္ဂနွေတွင်: 1 တစ်နာရီရထား.
ယခုငါတို့ရထားအားဖြင့်သင်တို့ကို Tomorrowland အပေါ်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပေးပြီကြောင်း, ကပျော်စရာအစိတ်အပိုင်းအတွက်အချိန်မယ့်! ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖွင့်ဆိုပါက Tomorrowland သွား, သငျသညျဖြစ်ကောင်းကကဲ့သို့ဖြစ်မယ့်အရာကိုအံ့ဩပါတယ်. Tomorrowland ကျိန်းသေပတ်လည်ကိုဖန်တီးခဲ့သောဖောင်းပွရကျိုးနပ်သည်. Tomorrowland running နှစ်ပေါင်းများစွာကမ္ဘာ့အငြင်းပွားဖွယ်မရှိအကြီးမြတ်ဆုံး EDM ဂီတပွဲတော်မဲပေးခဲ့သ. တဦးတည်းရဲ့တသက်တာမှာအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်လာရောက်လည်ပတ်မဆိုဂီတပရိတ်သတ်တစ်ဦးမဖြစ်မနေဖြစ်လာခဲ့ပါသည်, ပါတီ goer သို့မဟုတ်ပွဲတော်ဝါသနာအိုး. Tomorrowland 2018 ပွဲတော်ရဲ့သမိုင်း၌အကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်တက်ပုံဖော်နေသည်. ဒါဟာအလင်းအထိသတ်မှတ်ထားစိတ်ကူးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုပညာရှင်များအမှန်တကယ်အံ့ဖှယျအရေအတွက်ကိုရှိပါတယ် 16 မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အဆင့်ဆင့်.
တစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် lineup ရှိခြင်းအပြင်, စီစဉ်အရာရာစဉ်းစားခဲ့ကြဟန်, သငျသညျကိုငှားရမ်းနိုင်ပါတယ် Locker တွေအပါအဝင်, သင့်ဖုန်းနှင့်ပင်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးအားသွင်းဖို့သောအရပ်တို့ကိုမပုလဲဟုခေါ်တွင်. သငျသညျ top-up, ရန်သင့်လက်ကောက်ပုလဲနှင့်အတူ options အမျိုးမျိုးရှိတယ်: သင်သည်သင်၏မှာအွန်လိုင်းပုလဲ add နိုင်ပါတယ် Tomorrowland အကောင့်, အဆိုပါ tab ကို '' ငါ့အလက်ကောက်မှာ’ သင့်ရဲ့ခရက်ဒစ်ကဒ်နှင့်အတူပွဲတော်မတိုင်မီ (VISA, Mastercard), Bancontact, Sofortüberweisungသို့မဟုတ်အကောင်းဆုံးကတော့. ဒါဟာတကယ်သင်နောက်ကွယ်မှအားလုံးသင့်ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်ထားခဲ့နိုင်သည်နေရာဖြစ်လာ!
ကျနော်တို့ကအကြံပြု သငျသညျနောကျလိုကျ Facebook ပေါ်မှာ Tomorrowland အဆိုပါ lineup နှင့်အထွေထွေအတွင်းပွဲတော်အပေါ် updates များကိုရရှိရန်, သငျတို့သလည်းလိုကျလြှောကျနိုငျ တစ်ဦးကရထားတွစ်တာ Save
မည်သည့်အဘို့ ဥရောပရထားလက်မှတ်တွေ, အထူးသဖြင့်မီးရထားဖွငျ့ Tomorrowland အားလုံးကိုဥရောပကျော်ထံမှ, ကိုယ့်ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားက်ဘ်ဆိုက် Enter နှင့်သင့်မီးရထားစီးနင်းပျော်မွေ့.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/tomorrowland-by-train/- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/nl_routes_sitemap.xml, သငျတို့သ / က de သို့မဟုတ် / ကြောင်းနှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများဖို့ / nl ပြောင်းလဲနိုင်သည်.
စန်း ဘရပ်ဆဲလ် Tomorrowland travelbelgium
Hidden ဥရောပခုနှစ်တွင်ကျောက်မျက်ရတနာပြီးတော့ဘယ်လိုရထားအားဖြင့်ရှိပါတယ် Get ရန်